ID ID | January 2020
Anyị na-amụta ID ID echefuru
Apple ID - akaụntụ nke dị mkpa maka onye ọ bụla nwe ngwaahịa Apple. Site n'enyemaka ya, ọ ga-ekwe omume ibudata ọdịnaya mgbasa ozi na ngwa apụl, jikọọ ọrụ, chekwaa data na nchekwa igwe ojii na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ezie, iji banye, ịkwesịrị ịma Apple ID gị.
Weghachite paswọọdụ ID ID
Apple ID bụ akaụntụ kachasị mkpa na onye ọrụ ọ bụla nke ngwaọrụ Apple na ngwaahịa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ a nwere. Ọ na-ebu maka ịchekwa ozi banyere ịzụrụ, ọrụ ejikọrọ, jikọtara kaadị akụ, ngwaọrụ eji, wdg. N'ihi mkpa ya, jide n'aka icheta paswọọdụ maka ikike.
Ebe ọ bụ na Apple ID na-echekwa ọtụtụ ozi nzuzo onye ọrụ, akaụntụ a chọrọ nchebe dị ukwuu nke na agaghị ekwe ka data daba na aka ọjọọ. Otu n'ime ihe ndị na-esi na-akpata nchebe bụ ozi ahụ "Akwụsịla ID ID gị maka ihe nchekwa." Iwepụ Nchekọ ID ID maka Nche Nchebe Ozi dị otú ahụ mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla ngwaọrụ jikọtara na ID Apple nwere ike ịmalite ịbanye na paswọọdụ na-ezighị ezi ma ọ bụ inye azịza na-ezighị ezi maka ajụjụ nchedo gị ma ọ bụ onye ọzọ.
Ụzọ ịkpọghee ID ID
Igwe mkpọchi ID nke Apple pụtara na ngosi iOS7. Uru nke ọrụ a na-abụkarị obi abụọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ndị ọrụ efu (furu efu) onwe ha na-ejikarị ya eme ihe, mana ndị na-eme nchọpụta, bụ ndị site na aghụghọ na-eme ka onye ọrụ ahụ banye na onye ọzọ Apple ID wee kwụsịzie ngwa ngwa ahụ.
Idozi njehie "Emezighị nkwado, enweghị ike ịbanye na"
Ọtụtụ ndị nwe ngwaọrụ nke oge a na-eche ụfọdụ njehie n'oge usoro eji ngwaọrụ ahụ. Ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị dị na usoro iOS enweghị ihe ọzọ. Nsogbu na ngwaọrụ site na Apple anaghị adịkarị ike ịbanye ID ID gị. Apple ID - otu akaụntụ ejiri maka nkwurịta okwu n'etiti ọrụ Apple niile (iCloud, iTunes, App Store, wdg.
Anyị na-ewepu kaadị akụ n'aka Apple ID
Taa, anyị ga-ele anya ụzọ ndị ga-enye gị ohere ịhapụ kaadị bank Apple Eid. Na-echere kaadị ID ID Ọ bụ ezie na e nwere ebe nrụọrụ weebụ maka ijikwa Apple ID nke na-enye gị ohere ịmekọrịta na akaụntụ data ahụ niile, ịnweghị ike ịhapụ kaadị ya: naanị ị nwere ike ịgbanwe usoro ịkwụ ụgwọ.
Otu esi agbanwe Apple ID
Na-arụ ọrụ na ngwaahịa Apple, a na-amanye ndị ọrụ ịmepụta akaụntụ ID Apple, na-enweghị mmekọrịta ya na ngwa na ọrụ nke onye na-emeputa mkpụrụ osisi kachasị oke agaghị ekwe omume. Ka oge na-aga, ozi a na Apple Aidie nwere ike ịghọ oge ochie, nke onye ọrụ nwere ike iji dezie ya.
Idozi njehie jikọtara na ihe nkesa ID Apple
Ọtụtụ ndị na-eji ngwaọrụ na ngwaọrụ iOS arụ ọrụ kwa ụbọchị na-eche ọtụtụ nsogbu. Ọtụtụ mgbe, ha na-eme n'ihi ọdịdị nke njehie na nsogbu nchịkwa mgbe eji ngwa, ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche. "Njehie na-ejikọta na nkesa ID ID" bụ otu n'ime nsogbu ndị nwere nsogbu mgbe niile mgbe ejikọtara na akaụntụ ID Apple gị.
Otu esi emepụta ID ID
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ọ dịkarịa ala otu ngwaahịa Apple, mgbe ọ bụla, ị ga-enwe akaụntụ Apple ID e debara aha, nke bụ akaụntụ nkeonwe gị na nkwụnye ego nke ihe niile ị zụtara. A ga-atụle ihe ndekọ a na ụzọ dịgasị iche iche n'isiokwu ahụ.
Esi gbanwee paswọọdụ site na ID ID
Okwuntughe bụ ngwá ọrụ kachasị mkpa iji kpuchie ozizi nke ndekọ ahụ, n'ihi ya, ọ ghaghị ịdabere na ya. Ọ bụrụ na paswọọdụ ID ID gị adịghị ike, ị kwesịrị iwepụta nkeji iji gbanwee ya. Gbanwee paswọọdụ ID ID gị. Site na ọdịnala, ị nwere ọtụtụ ụzọ n'otu oge na-enye gị ohere ịgbanwe paswọọdụ gị.
Esi wepu Apple ID
Onye ọrụ ọ bụla nke ngwaahịa Apple nwere akaụntụ ID Apple e debara aha nke na-enye gị ohere ịchekwa ozi gbasara akụkọ ịzụta ihe, ụzọ nkwụnye ụgwọ, ngwaọrụ ejikọrọ, wdg. Ọ bụrụ na ị naghị ezube iji akaụntụ Apple gị, ịnwere ike ihichapụ ya. Ihichapụ Akaụntụ Akaụntụ Apple N'okpuru ebe a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ isi ehichapụ akaụntụ Apple gị, nke dị iche n'ebumnuche na arụmọrụ: onye mbụ ga-ehichapụ akaụntụ ahụ kpamkpam, nke abụọ ga-enyere gị aka ịgbanwe data ID ID, si otú a na-ahapụ adreesị ozi-e maka ndebanye aha ọhụrụ, nke atọ ga-ehichapụ akaụntụ na ngwa Apple.
Anyị na-ahazi Apple ID
Apple ID bụ otu akaụntụ na-eji abanye n'ime ngwa ngwa Apple dị iche iche (iCloud, iTunes, na ọtụtụ ndị ọzọ). Ị nwere ike ịmepụta akaụntụ a mgbe ịtọlite ​​ngwaọrụ gị ma ọ bụ mgbe ịbanye na ụfọdụ ngwa, dịka ọmụmaatụ, ndị ahụ edepụtara n'elu. Site na isiokwu a, ị nwere ike ịmụta otu esi emepụta ID nke onwe gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © ID ID 2020